Iilebheli ezishelifini ze-NFC ziyasebenza kwiWal-Mart, China Resources Vanguard, Rainbow, ezinye iivenkile ezinkulu kunye neendawo zokugcina ezinkulu. Ngenxa yokuba ezi venkile kunye nendawo yokugcina izinto ikakhulu zigcina izinto, iimfuno zolawulo zingqongqo kwaye zinzima. Masithathe umzekelo ukubonisa ukuba ulwazi kunye namaxabiso ezinto ezivenkileni ezinkulu zitshintsha yonke imihla. Iya kuchitha amandla amakhulu kunye nezixhobo ezibonakalayo xa utshintsha ulwazi lwezinto zorhwebo. Kwangelo xesha, kukho amathuba aphezulu okwenza iimpazamo. Kwivenkile egcina isantya namaxesha, bubuthathaka obubulalayo kubarhwebi ukwenza iimpazamo kumaxabiso emveliso kunye nolwazi. Iilebheli ezishelifini ze-NFC ziyisombulula ngokupheleleyo le ngxaki. Ngenxa yokuba ileyibhile yeshelfu yombane ye-NFC ithunyelwa yifowuni ephathekayo kwidatha ehambelanayo kunye nexabiso lemveliso etshintshiweyo kwileyibhile nganye yeshelf ye-elektroniki ehambelanayo, ukuba nje ifowuni iyaswayipha, ulwazi lungatshintshwa kwimizuzwana eyi-15.
Iilebheli ezishelfini ze-NFC ze-elektroniki zithelekiswa neethegi zamaxabiso ephepha
Xa kuthelekiswa neelegi zamaphepha emveli, iilebhile zeshelfu zombane ze-NFC zinokutshintsha ngokuqhubekekayo kwaye zitshintshe imveliso kunye nolwazi ngemveliso, ukuthintela ixesha elide lolawulo, inkqubo yokuphumeza nzima, iindleko eziphezulu zento ezisetyenziswayo, Ithegi yentengo ithambekele kwiimpazamo nakwezinye izinto ezingalunganga. Iilebheli zeshelf zombane ze-NFC azisombululi kuphela iziphene ezibangelwa ziithegi zamaxabiso ephepha kulawulo lwezinto zorhwebo, kodwa zikwaphucula iinkonzo zevenkile ezinkulu nakwiivenkile. Kwixesha elidlulileyo, xa sisiya kuthenga izinto evenkileni, kufuneka sifunde ngononophelo ixabiso kunye nebhakhowudi yeempahla, kwaye singade sizifumane. Ithegi yentengo ikhokelela ekuthengeni okungathandekiyo kunye nokungangqinelani kwamaxabiso kwinkqubo yokuthenga, nto leyo inciphisa umgangatho wenkonzo yevenkile. Oku kungasombululwa ngokupheleleyo ngeelebheli zeshelf zombane ze-NFC. I-NFC inokwazisa umlawuli ngenethiwekhi, ngeSMS, nge-imeyile, njlnjl. Ukutshintsha ulwazi kunye nexabiso lempahla ngexesha, elingaphuculi kuphela umgangatho wenkonzo kodwa liyabunciphisa kakhulu ubunzima bolawulo kwaye liphephe iimpazamo ezingeyomfuneko.
Nguwuphi umahluko phakathi kwelebheli yeshelf ekhompyutheni yekhadi le-smart elidityanisiweyo kunye nelebheli yeshelf ekhompyutheni kwintengiso
Iileyibhile ezishelfini zombane ezivenkileni kufuneka zitshintshe idatha kunye namaxabiso ezinto zokwenza izinto ngekhompyuter, kwaye iilebheli zeshelf zombane zekhadi elidityanisiweyo ziyimveliso ezingcono kunye namaxabiso ngecala lefowuni ephathekayo, owona umahluko mkhulu phakathi kwezi zimbini . Ixesha lokutshintsha kwedatha yelebheli yeshelf ekhompyutheni yekhadi le-smart elihlanganisiweyo li-15s, kwaye ileyibhile ye-elektroniki yentengiso ithatha i-30s. I-United Smart Card igxile kuphuhliso kunye nokusebenza kwe-NFC yeeleyibhile yedatha yelebheli yedatha ye-APP; akukho mfuneko yokuba abaphathi baphathe iselfowuni yokulawula idatha yorhwebo, okoko nje umphathi weselfowuni enomsebenzi weNFC unokuqhutywa.